“Xeer Hoosaadka Golaha Wakiilada Ayaa Caqabad Ku Ah Golaha Wakiilada…..Xildhibaan Cabdi Qaadir Xaamud |
“Xeer Hoosaadka Golaha Wakiilada Ayaa Caqabad Ku Ah Golaha Wakiilada…..Xildhibaan Cabdi Qaadir Xaamud
Hargaysa(GNN)Xildhibaan Cabdi Qaadir Xaamud oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha wakiilada somaliland ayaa soo jeediyay in Labada Guddoomiye ee fadhiga isku gacan saaray la Anshax mariyo xeer hoosaadka golahuna shaqeeyo.
waxa uu Xildhibaanku ka hadlay Xeer hoosaadka Golahu inuu Caqabada ku yahay Kadeedna ku hayo Mudanayaasha Golaha ,isla markaas iyada oonay Xildhibaanadu isku raacsanayn Loo cadeeyay,khilaafkana uu sabab u yahay Xeer Hoosaadka Golahu.
Cabdi Qaadir ayaa ka hadlay wararka sheegay in Mooshin Xilka lagaga Qaadayo Guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland la horkeeni Dooni fadhiga golaha wakiilada ee ugu horeeya marka Fasaxa laga soo noqdo waxaana uu yidhi.
“Hortu arintaasi ee dagaalka ahi waxa ay ahayd arin Fool Xun,Golahana Labada odayba way ka raaligaliyeen arintaas dhacday labadooduba,waxna way dhacaan wixii dhacana siday u dhaceen iyo waxaasi meesha mataalo,lakiin Sidii laga yeeli lahaa ayay ku jiraan odayaasha guurtidu ee Mustanbeedka Somaliland ayaa Gacanta ku haya Jawaabtana iyaga ayaanu ka Sugaynaa.
intaas waxa uu ku daray Xildhibaan Cabdi Qaadir Xaamud oo hadalkiisa siiwata.”Hortu in ay dadku ka Garnaqaan Maaha,golahu xeer hoosaad iyo Shuruuc dalka u taala ayuu leeyahay,taas ayaa lagaga hadlayaa oo lagaga garnaqayaa,dadkuna xaalad aan jirin in ay abuuraan maaha,arintanina waa arin Golaha ka dhacday una Taal golaha iyagaana dhamaysan doona,hadii dheeraad yimaadana Guurtida ayaa iman Doonta.
waxa uu ka hadlay Sidoo kale Xildhibaanku marka uu golahu uu furmo in la keenayo Mooshin Xilka lagaga Qaadayo Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland,taas oo ku sheegay mid aan wali soo gaadhin oo aanay ka war hayn waxaana uu yidhi.
“Taas waxba walaal waxba kalama Socdo,mana ogi,lakiin hortu hawshan muhiimka ah ee golaha ka dhacday hala dhameeyo,waxaanan odhan karaa hala gaadho markaas wixii jiraaba way soo bixi doonaan,waxbana inagama Xigaan ee waa la sugi doonaa.
Geesta kale xildhibaan Cabdi Qaadir Xaamud ayaa cadeeyay in Caqabada koobaad ee golaha haysataa in ay tahay xeer hoosaadka golaha wakiilada sabab u yahay in ay Markasta golahu is qabsadaan waxaana uu yidhi.
“haa wajirtaa xeer hoosaad hada ka hor golaha lakeenay oo Dastuurka,Baalmarsan ayay Mudanayaashu Gacanta u taageen oon la isku raacsanayn,Xeer hoosaadkaas ayaa dalka kadeed ku ah oo golahana Maalin kasta Kadeedka ku ah oo dhibaatada ka abuuray kaas ayuu ahaa,kaasna waa kii xeer hoosaadkii 2005kii la sameeyay ayaa lagu dhaqmi doonaa oo dastuurkana aan ka horimanayn,wixii dastuurka diidanina sharci maaha.
intaas waxa uu ku daray”.Xeer hoosaadku waxa uu dhigayaa golahii hore ee aan anigu ku jiri jiray ee 2004kii xeer hoosaadka ayaa dhigaya marka uu mudanayaashu marka ay khalad galaan,gudida joogta aya anshax marin jirtay,saddex cisho ayaa golaha laga saari jiray fadhigana ka maqnaan jiray,lakiin waxa kasta waxa ay ku qurux badan yihiin in Sidooda loo daayo,guddoomiyahuna marka uu hadlayo in laga daba hadlo Khalad ayay ahaan jirtay,Balse hada wixiiba way is badaleen.
Dhawaaqan ka soo yeedhay Xildhibaan Cabdi Qaadir Xaamud ayaa imanaya iyada oo labada Guddoomiye ee golaha Wakiilada Somaliland Fadhiga isku gacan saareen,waxaana uu soo jeediyay in la anshax mariyo Cabdiraxmaan Ciro iyo Baashe Maxamed Faarax,xeer hoosaadka golahuna qabto oo laga shaqaysiiyo.